Ny fandraràn'i Etazonia dia mivezivezy avy any India ao anatin'ny fiakaran'ny vidin'ny coronavirus
Home » Lahatsoratra farany farany » Fiarovan-tena amin'ny loza sy loza » Ny fandraràn'i Etazonia dia mivezivezy avy any India ao anatin'ny fiakaran'ny vidin'ny coronavirus
Airlines • Airport • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • Hospitality Industry • Vaovao Mafana India • Vaovao • People • tompon'andraikitra • Safety • Tourism • Dinika fizahan-tany • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Tsiambaratelo momba ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Etazonia Vaovao Vaovao • Vaovao isan-karazany
Ny olom-pirenena amerikana tsy tokony handeha ho any India na hiala raha vao azo antoka izany
Voarara ny ankamaroan'ny dia avy any India mankany Etazonia noho ny areti-mifindra
Mihatra manomboka ny talata 4 may izao ny politika
Nilaza ny hivoaka haingana any India ny olom-pirenena amerikana
Nanambara ny fitantanan-draharaha amerikana fa ny ankamaroan'ny dia avy any India dia voarara manomboka ny talata eo afovoan'ireo tranga COVID-19 ao amin'ny firenena.
“Araka ny torohevitry ny Foibe Miady Amin'ny Aretina, ny governemanta dia hametra ny dia avy any India manomboka dieny izao, ”hoy ny sekretera ny White House Jen Psaki nanambara ny zoma.
"Hampiharina io politika io raha oharina amin'ny caseload COVID-19 avo lenta sy karazana karazany maro mivezivezy ao India," hoy izy.
“Hanan-kery io politika io amin'ny talata 4 Mey.”
Ny hetsika dia eo an-tampon'ny fameperana fitsangatsanganana iraisampirenena efa misy mitaky ny olona hanana valin'ny fitsapana ratsy alohan'ny hahatongavany any Etazonia. Ny hetsika dia tsy antenaina hihatra amin'ny olom-pirenena amerikana.
Talohan'izay dia nasaina nivoaka haingana tany India ny olom-pirenena amerikana satria nihombo ny krizy COVID-19 tamin'ny firenena tamin'ny fomba nahagaga.
Ny departemantam-panjakana amerikana dia namoaka mpanolotsaina momba ny dia 4 - ny avo indrindra amin'ny karazany toy izany, nilaza tamin'ny olom-pirenena amerikana fa "tsy tokony handeha ho any India na hiala raha vao azo antoka izany."
Raha ny filazan'ny departemanta dia misy sidina 14 mivantana isan'andro eo anelanelan'i India sy Etazonia ary serivisy hafa mifandray amin'i Eropa.
Ny fiakaran'ny COVID-19 tany India dia niharatsy be tao anatin'izay herinandro lasa izay. Ny trangana virus coronavirus vaovao ao amin'ny firenena dia nisondrotra hatramin'ny 380,000 XNUMX mahery tao anatin'ny iray andro.